Dastabej » जनताको मन जित्नलाई धेरै कठिनाई छः वडाअध्यक्ष सुरेश अहिर
जनताको मन जित्नलाई धेरै कठिनाई छः वडाअध्यक्ष सुरेश अहिर – Dastabej
जनताको मन जित्नलाई धेरै कठिनाई छः वडाअध्यक्ष सुरेश अहिर
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ५ बर्षे कार्यकालमध्ये ४ बर्ष पूरा गरिसकेकाछन् । अब एक बर्ष मात्रै बाँकी छ । अन्तिम बर्षको बजेट पनि निर्माण गरिसकेका छन् । अब जनप्रतिनिधिहरुको कामको मूल्याङ्कन गर्ने मात्र होइन परिणाम देखिनु पर्ने बेला पनि हो । जनप्रतिनिधिलाई हामीले पाँच प्रश्न मार्पmत उनीहरुले गरेको काम, भोगेको चुनौती र अनुभवलाई समेट्ने गरेका छौ । पाँच प्रश्न श्रृङ्खलामा मतदाता माझ उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धताको स्मरण गराउने र बाँकी समयमा ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रेरित गर्न सघाउने उद्देश्य पनि हो । आज जानकी गाउँपालिका ६ का वडाअध्यक्ष सुरेश अहिरसंग शम्भु थारुले गरेको अन्तरसंबाद ।
तपाई देखिने गरी के के काम गर्नुभयो ?
देखिनेगरी त धेरै काम गरेका छौ । बिद्यालयहरु बनायौ । स्वास्थ्य भवन र सुत्केरी गृह निर्माण ग¥यो ।ठाउँ ठाउँमा कालोपत्रे पिच ग¥यो । ६÷७ किलोमिटर पक्की बाटो र नाली बनायौ, कोलीया बाटो पिसिसी ग¥यो । मन्दिर स्तरउन्नती ग¥यो । यस्तै धेरै सानाठुलो धेरै काम गरेका छौँ ।
अब के के काम गर्न बाँकी छ ?
अब के गर्न बाँकी छ भनेपछि लगभग ७० प्रतिशत बाटोको काम भ्याएका छौ । ३०÷३५ प्रतिशत बाटोको काम अभैm बाँकी छ । बिद्यालयको स्तरउन्नतीको काम अगाडी बढाएका छौ त्यो काम अलिकति बाँकी छ । पुर्वाधारको कामतर्पm बाटो कुनै पनि राम्रो थिएन । हामीले धेरै संघर्ष गरेर पक्की बाटो बनायौ । अहिले गाउँगाउँ टोलटोलमा पक्की बाटो हेर्न पाएकाछन् नागरिकहरुले ।
नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई बढी सहयोग गर्दा रहेछन् कि बढि आलोचना ?
प्रशांसा गर्ने लायकको काम गर्नु भयो भने प्रशांसा गर्छन् । प्रशंसा गर्ने लयाक काम गर्नु भएन भने बिरोध पनि जनाउँछन् । मेरो वडामा एकदम ठिक छ । मैले गरेको कामको मुल्यांकन जनताले गरेकै छन् ।
निर्वाचनको बेलामा प्रतिबद्धता जनाएको तर अहिलेसम्म पूरा गर्न नसकेको काम के छ ?
प्रतिबद्धता अनुसारको केही काम बाँकी छ, सिचाईको सन्र्दभमा । अब पहिला सिक्टा सिचाई आयोजना राम्रोसंग सुचारु भएको थिएन् । गतबर्षको असारबाट सुचारु भएको छ । तै पनि सबै ठाउँमा राम्रोसंग पानी लाग्दैन । डीप बोरिङ्ग २÷३ ठाउँमा लगाउनु पर्ने छ, हामीले पटकपटक माग गरीराछौ । अब डीप बोरिङ्ग थोरै पैसाले त हुदैन, त्यै भएर प्रदेश र संघबाट माग गरेका छौँ । त्यो मात्रै बाँकी छ, कृषिमा र शिक्षाको सन्र्दभमा यो कोरोना भाइरसले दुई साल देखि प्रभाव पारेको छ । किनभने हाम्रो माबि बिद्यालय छ । त्यसमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ८ कोठे दुई तल्लाको भवन बनायौ । पर्खालको काम बाँकी छ ।
त्यसो भए जनप्रतिनिधिको जिम्मेबारी निभाउँदाको चुनौती के रहेछ ?
जनप्रतिनिधिको भुमिका निभाउनलाई त धेरै चुनौती छ । जनताको मनोबल जित्नलाई धेरै कठिनाई छ । बाटो बनाउदा समान्य बिवादमा मुद्दासमेत परिराछा । जनताले हाली राछन् । तै पनि छलफलको माध्यमबाट समास्या समाधन गर्दै अगाडी बढेका छौ । जनताको मन जित्नलाई धेरै समस्या छ । यो अबधिसम्म आउँदा हामीलाई बाटो बनाउनमा धेरै कठिनाई आयो । मधेसी बाहुल्याता भएको मेरो वडा हो । शिक्षामा पनि पछाडि परेको कारणले गर्दा पछाडि घर चाहे भत्किजाओस्, नबनाओस् तर अगाडी बाटो क्याप्चर गर्ने मनस्थिति छ । सबै ठाउँमा बाटोको एकदम समस्या छ । २ ईन्च ४ ईन्चमा झगडा भैराछ । त्यहाँ यस्तो बाटो छ कि हिड्न मिल्दैन, हिलोहिलो छ । त्यो बाटोलाई ६ मिटर, ८ मिटर र १० मिटर बनाउनमा धेरै समस्या आएको हो । यसमा मैले धेरै चुनौती भोगेर भए पनि अहिले धेरै राम्रोसंग बाटो बिस्तार भैराछा । २०७८÷७९ को बजेटले अब कति बन्छ बाटो, त्यो हो । अब आउने स्थानिय निर्वाचनमा फेरी जनताको बिचमा जाउँला । मैले वडाको बिकासमा खेलेको भुमिका र निभाएको जिम्मेबारीको मूल्यांकन जनताले गर्नेछन् भन्ने आशा छ मेरो ।
८ भाद्र २०७८, मंगलवार १४:१२ प्रकाशित